Doka "ambadiky ny seho" mahafinaritra miaraka amin'ny monster cookie | Avy amin'ny mac aho
Apple dia manana fantsona YouTube tato ho ato izay sahirana tokoa amin'ny resaka horonantsary izay navoaka. Marina fa afaka miteny isika fa ny tsirairay amin'izy ireo dia doka, fa na eo aza ny doka dia mieritreritra aho ny sasany amin'ireto horonantsary fohy ireto dia tsara.
Ity horonantsary vaovao ity dia navoaka ora vitsy lasa izay tao amin'ny fantsom-pahalalana zazalahy Cupertino, mampiseho antsika ilay biby goavam-be cookie ao amin'ny seho firaketana ny doka natombok'izy ireo hampiroborobo bebe kokoa ny mpanampy an'i Siri, rehefa tsapa ny tsaho momba ny fahatongavany tao amin'ny OS X. Ankehitriny ny orinasa dia mamoaka ity horonantsary hafa ity miaraka amin'ny ao ambadik'ireo fakantsary amin'ny fizotry ny firaketana.
Raha ny lojika dia azo heverina ho doka hafa momba an'i Siri ao amin'ny iPhone misy an'ity bibikely masiaka mahafinaritra ity ary raha tamin'ny horonan-tsary teo aloha dia nampihomehy izahay nahita azy, tamin'ity tranga ity hitondra tsiky hafa ho antsika.
Apple dia matotra amin'ny fandefasana doka amin'ny YouTube ary heverinay fa hevitra tsara dia tsara ny hanatratra mpampiasa bebe kokoa. Ny dokam-barotra sasany dia mahatsikaiky kokoa ary ny sasany mampihetsi-po kokoa, toy ny tamin'ny horonantsary roa navoaka tamin'ny 2 aprily. Ireo dia natokana hanentanana ny olona amin'ny tena aretina sarotra toa ny Autism ary hanasongadinana ireo tombontsoa atolotry ny teknolojia amin'ireto tranga ireto, satria Apple dia mampiseho amintsika horonan-tsary roa momba ny zaza iray izay voan'ny autisme ary azonao jerena ao amin'ny fantsony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Doka tsara any ambadiky ny seho miaraka amin'ilay biby goavam-be
Nahazo fanavaozana vaovao ny fisamborana Giphy ho an'ireo tia GIF
Ampiasao ny afomanga HD hanampiana afomanga amin'ny screensaver anao